Play online in SuperEnalotto. Win malaayiin. : PlayLotteryOnline.info 2022
->>> Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan SuperEnalotto
Ciyaarta waxa ay ka imanaysaa Italy (Europe). Isku aadka ugu horeeyay ee ka dhacay on 3 XII 1997 sanad. Ka hor inta SuperEnaLotto ciyaarta, Italy ahayd ciyaar Enalotto jecel yahay in powstałach qarnigii 50 th ah. In SuperEnaLotto yihiin jaakbotyada ugu weyn dunida oo dhan. Tan waxa u sabab, iyo waxyaabo kale, sababtoo ah ciyaarta waa mid aad loo jecel yahay aduunka oo dhan, iyo geedaha laga gadan karaa Internet-ka. Iyadoo ciyaarta Super ena Lotto noqon bilyaneer iyo goáanada oo dhan.
Tirada nasiib barbaro waxaa la qabtaa Tuesday kasta, Khamiis iyo Sabtida. Drawings yihiin at 20:00 waqtiga degaanka ee Italy. The SuperEnaLotto lambarada isku aadka waxaa loo sameeyaa by qaadashada lambarada ugu horreeya ee bakhtiyaanasiibka, kaas oo la ciyaaray lix magaalo oo Talyaani ee xuruufaha: Bari, Florence, Milan, Naples, Palermo iyo Rome. SuperEnaLotto horseedaa Sisinta tan iyo 1996.
Rules of ciyaarta: Si aad ku guuleysato Ghanna waa in aad si sax ah u dooran 6 Lambarada out of 90 lambarada. Waxa kale oo aad dooran kartaa lambarka dheeraad ah - Jolly Number. Waxaa la kiciyey xaddiga Abaalmarinta ugu weyn ee, laakiin garaacid lambarkan oo dheeraad ah, oo aad kor u qaadi kara height of the abaalgudyada yar yar. Superstar si fiican u soo dhaamiyeen.
Ghanna shahaado ugu horeysay ee SuperEnalotto aasaasiga ah waa € 1.300.000 iyo qadarka this haddii qofna hits 6 tiro oo raasamaal sii kordhaya. Ma jiraan xayiraad on qadarka lacagta oo SuperEnaLotto badisay.
Itimaalka of badisay SuperEnaLotto: Itimaalka of garaacid 6 Lambarada waa 1 ee 622.614.630. Waa hilaada aad u yar, laakiin si SuperEnaLotto raasamaal this mahad kuwo aad u baaxad wayn iyo waxa ay noqon karaan bilyaneer. Hit 5 lambarada + tirada Match waa 1 103 769 105 5 lambarada trafionych SuperEnaLotto badan tahay 1 to 1.235.346 Itimaalka of garaacid 4 tiro nasiib yihiin 1 ilaa 11907 Dhab ahaantii si fudud loo garaaco 3 lambarada. 1 to 327 waxaa laga yaabaa inay ku dhuftay 3 lambarada.